Vaovaon’ny fandrarana lehilahy Okrainiana tsy mahazo mandeha dia lavitra nopaingorin’ny miaramila ho hosoka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Novambra 2015 10:31 GMT
Mampitandrina ny miaramila Okrainiana: Raha naditra ianao ary nampiely tsaho, dia tsy ho avy ny dadabe noely! Sary namboarin'i Tetyana Lokot.
Tamin'ny 19 Novambra, nifoha tamin'ny fahitana vaovao milaza toy izao ny lehilahy Okrainiana fa raha latsaky ny 45 taona ry zareo dia tokony hanafoana ny dia kasain'izy ireo atao amin'ny fanombohan'ny taona 2016, satria nandrara ny fandaozan'izy ireo ny firenena i Okraina. Fa izany tokoa ve no izy?
Ny tranonkala Izvestia v Ukraine no nandefa tantara iray mitondra ny lohateny hoe “Manomboka amin'ny 1 Janoary, dia voarara tsy mahazo miala ny firenena ny lehilahy latsaky ny 45 taona.” Ny piesy dia notaterina amin'ny filazana fa misy lalàna vaovao hihatra ao Okraina amin'ny fanombohan'ny taona 2016. Milaza ny lalàna, araka ny fanoritsoritan'ny tantara, fa tsy afaka ny hiampita sisintany izy ireo raha latsaky ny 45 taona, ary na izany aza, dia tsy maintsy mahazo [alalana tsy hanao miaramila] avy amin'ny komandi-tafika. Ilay seha-baovao dia naka ny loharanom-baovao tao amin'ny tranonkalan'ny Golos Pravdy namoaka alohaloha kokoa ny tantara (izay sehatra famoaham-baovao Okrainiana ihany koa), izay nilaza kosa fa nahazo io vaovao io avy amin'ny loharanom-baovao tsy voatonona anarana ao amin'ny Sampan-draharaham-Piarovana Okrainiana.
Pikantsarin'ny lahatsoratra tao amin'ny Golos Pravdy.
Na dia tsy nisy aza ny fanamafisana [hita] avy amin'ny manampahefana Okrainiana ary tsy hita tao amin'ny tranonkalan'ny Antenimiera Okrainiana aza izany lalàna, na drafitra na volavolan-dalàna, na zavatra hafa momba azy io, dia niely haingana any amin'ny fampitam-baovao an-tserasera ny “vaovao”, na dia hoe navoakan'ireo tranonkala kelikely na anjorom-bala, tahaka ny NA Kharkov (naseho talohaloha teo ho tranonkalam-baovao Okrainiana sandoka velomin'ny hery pro-Kremlin), Ukraina.ru, ary Zavtra.ua.
Namaly tamin'ny tsi-finoana ilay vaovao ny mpiseraseran'ny media sosialy, ary niahiahy azy haingana ho hosoka.
Angaha i Rosia nanambara fifaninanana izay vaovao adaladala indrindra momba an'i Okraina ka nanapa-kevitra i Izvestia v Ukraine handresy an'i Life News?
Ora vitsivitsy taty aoriana ny alakamisy, nanapongatra ilay hosoka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny pejy Facebook ny Komandy Jeneralin'ny Tafika Mitam-Piadiana an'i Okraina, ary nanampy izany tao anatin'ny hanihany manala voly rehefa nanao izany.
1. Tsy mitombina araka ny zavamisy ny filazana fampidirana fandrarana tsy hivezivezy avy aty Okraina ho an'ny lehilahy rehetra latsaky ny 45 taona.
2. Tsy mitombina araka izany ihany koa ny fameperana ho an'ny lehilahy mihoatra ny 45 mandao ny firenena.
3. Tsy hisy ihany koa ny fameperana tsy handeha lavitra ho an'ny vehivavy tsy ijerena ny taonany.
4. Toy izany ihany koa ho an'ny ankizy.
5. Tsy misy fameperana fanampiny ampidirina amin'ny 2 Janoary 2016 ihany koa.
6. Oh, ary afaka mitondra ny biby an-tranonareo hivoaka ny firenena ihany koa ianareo, miaraka amin'ny fepetran'ny fanarahamaso ny biby misy amin'izao fotoana izao.
7. Ary ny fitondrana fananana miampita sisintany ihany koa dia malalaka amin'ny fanarahana ny lalànam-padintseranana misy ankehitriny.
8. Amin'ny 1 Janoary 2016 isika dia hahita ny Taombaovao. Araka ny loharanom-baovaonay hita hatraiza hatraiza.
9. Tsy hitsidika ireo mampiely tsaho sy vaovao tsy voamarina ny dadabe noely.
10. Tahaka izany ihany koa i Masindahy Nicholas [dadabe noely ihany amin'ny ôrtôdôksa].
Andro iray mialoha izany, tamin'ny 18 novambra, niditra tao amin'ny Twitter ny Ambasadin'i Etazonia ao Rosia hampiseho ilay taratasy sandoka nampiasain'ny gazety rosiana Izvestia ho fototry ny tatitra nataony. Notononin'ny tatitra ny dosie “niporitsaka” nolazaina fa nosorata'ny Departemantam-Panjakan'i Etazonia ho an'ilay Rosiana pelaka sady mpikatroka Nikolai Alexeyev, ary nilaza fa notoloran'i Etazonia vatsim-panohanana ny famoahana ilay vaovao manala baraka manampahefana rosiana ambony maro, mamoaka azy ireo ho pelaka.